Ezigbo Mbipụta na Chọọ | Martech Zone
Tọzdee, Machị 4, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ozugbo… Ọ na-aghọ nnọọ ihe dị mkpa. Webtrends weputara ezigbo oge ọchụchọ tinyere ihe ngosi. PubSubhubbub na-apụta maka blọọgụ iji mee ka nri ha karịa ka ha weghachite. Oge mmeghachi omume ọchụchọ na-ebelata… ndị mmadụ na-atụ anya azịza nye ajụjụ ndị ajụrụ naanị nkeji ole na ole gara aga.
Maka ndị nkwusa, ihe ịma aka dị na ya bụ imeghachi omume mgbe akụkọ mere na irite uru na ya ozugbo. Ọ bụrụ n ’ụlọ ọrụ mkpanaka ma ihe ọhụụ emee, ịkwesịrị ibipụta ozugbo enwere ike. Ọ bụghị naanị ewu ewu bụ ihe na-eme njem okporo ụzọ, ọ bụkwa ikike gị ịme.
Fewbọchị ole na ole gara aga, m bipụtara WordPress ngwa mgbakwunye maka ChaCha. Ihe mgbakwunye ahụ bụ ngwakọta nke ịnwale ụfọdụ ihe nke nnukwu ajụjụ nke ajụjụ ChaCha - nke dị ugbu a site na API, ndepụta nri, na faili ntanetị. Na ngwa mgbakwunye nwere ole na ole sidebar wijetị - onye na-enye ohere maka ezigbo oge na-ajụ ajụjụ na-aza azịza…. mara mma nke ukwuu.
Maka ndị nwe blọgụ, etinyekwara m dashboard ChaCha Trends nke na-enye ndị na-ede blọgụ nyocha nke data na-emekarị na ChaCha, Twitter na Google! Site na ịlele ozi na-ewu ewu, ị nwere ike ịba ụba na isiokwu nke ndị mmadụ na-ajụ maka, na-achọ, ma ọ bụ na-atụle.
Biko mee ka m mara ihe ị chere! Naanị gaa na ndekọ ngwa mgbakwunye gị, Tinye Ọhụrụ, ma chọọ ChaCha. Pịa wụnye ma wụnye mgbakwunye. Iji jiri wijetị sidebar, debanye aha maka onye nrụpụta nbanye na ChaCha ma ị ga-ebili ma na-agba ọsọ n’oge na-adịghị anya! Y’oburu na ichoro igba ihe dashboard, dee ihe obula n’ime API Igodo dị mkpa.
Enwere mkpọtụ mkpọtụ sitere na ọdịnala pop gaa n'akụkụ niile, mana ị ga-ahụ mkpuru ọ bụla n'otu oge ka ị nwee ike ịmalite. Iji oge dị n'ime ọdịnaya gị na ibipụta ọdịnaya ahụ ngwa ngwa nwere ike ịnye blog gị obere okporo ụzọ na-atụghị anya ya!
ngosi: ChaCha bụ onye ahịa.